Fairy Chimneys | Akụkọ Njem
Maria | | Ebe njegharị, Getaways
Geology bụ ihe na-adọrọ adọrọ ma dị iche iche karịa ka ọ nwere ike ịpụta na anya mbụ. Ihe omuma atu nke a bu umu anumanu, nke a makwa dika hoodoo, demoiselle coiffée ma obu pyramid.
Ihe ndị a bụ usoro okwute guzoro ogologo ka a ga - asị na ha bụ ụlọ elu New York. Nkume ụlọ elu nke ikuku, mmiri ozuzo na akpụrụ mmiri nwere ike ịkarị mita 40 n'ogologo na ụdị echiche ha na-echetara anyị ụwa ndị ọzọ enwere ike ịhụ na nke anyị. Typesdị ogidi ndị a abụghị nanị otu mpaghara ụwa. Enwere ike ịhụ ha n’ebe dị iche iche. Anyị na-egosi gị ebe!
1 Kapadoshia (Turkey)
2 Ogige Ugwu Bryce Canyon (United States)
Cappadocia bụ otu n'ime ebe pụrụ iche kachasị dị na Turkey. Ọdịdị na akụkọ ihe mere eme na-agwakọta iji nye onye ọbịa ahụ oge echefughi echefu. Otu ihe nzuzo ndị mpaghara a na-edobe bụ anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ nke nyegoro ụfọdụ ala mara mma mara mma na mba ahụ.
Akụkọ mgbe ochie na-agwa anyị na akụkọ ifo na ụmụ mmadụ biri na Kapadoshia. A machibidoro ịlụ di na nwunye iwu ka ọ bụrụ ihe ọma na ịga n'ihu nke ụdị abụọ ahụ, iwu nke anaghị eso mgbe niile. Dị ka akụkọ a si kwuo, otu oge akụkọ ifo na nwoke nwere ịhụnanya nke ukwuu nke na ha enweghị ike ịkwụsị mmetụta ha. Mgbe ahụ, eze nwanyị nke akụkọ ifo ahụ mere mkpebi siri ike: ọ gbanwere ọmarịcha akụkọ ifo ahụ na nduru ma napụnara ụmụ nwoke ikike ịhụ ha. Otú ọ dị, ha nwere ike ịnọ na nlekọta nke nnụnụ ndị ahụ.
Otu ihe kwesiri iburu n'uche mgbe ị na-ele anwụrụ anwụ na Turkey bụ na enwere ike ịchọta ha na akọrọ na ebe kpọrọ nkụ dịka ọzara. N'ihi nke a, na mpaghara Kapadoshia enwere atụ pụrụ iche nke anwụrụ ọkụ akuko ọkachasị n'akụkụ Aktepe, nke dị n'ebe ugwu nke Kapadosia. Agbanyeghị, ịnweghị ike ịhapụ uche mpaghara Uçhisa ma ọ bụ ndagwurugwu Palomar.
Ogige Ugwu Bryce Canyon (United States)
Ebe dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke steeti Utah ma dị nso na obodo Kanab bụ Bryce Canyon National Park, nke yiri ka a ga-esi na alaeze na-eche echiche efu. Ikekwe, ọ dịghị ebe ọ bụla n'ụwa bụ mbuze okike pụtara ìhè karịa n'akụkụ a nke ọdịda anyanwụ United States.
Ifufe, mmiri na ice kpochapụrụ obi ala Paunsaugunt iji gosi ọzara nke chimneys ma ọ bụ hoodoos. Ativemụ amaala America kwenyere na anwụrụ ọkụ anwụ bụ maka ndị oge ochie ndị chi na-atụ ụjọ.
Nke a rụpụtara na ọmarịcha ebe a na-eme egwuregwu na-agba ugwu na ụlọ elu okwute ndị enwere ike ịgagharị na ịnyịnya ma ọ bụ ụkwụ. N'abalị ọ na-adaba adaba ile anya na mbara igwe n'ihi na nke a bụ otu n'ime ebe kachasị gbaa ọchịchịrị na mbara ala ebe ị nwere ike ịhụ kpakpando nke ọma.
Na ndagwurugwu Ebro enwere ọtụtụ anwụ anwụ anwụ, ọkachasị n'ebe akpọrọ A Peña Sola de Collas na mpaghara Aragonese nke Cinco Villas. Na-ahapụghị otu obodo kwụụrụ onwe ya, na Alto Gállego ị nwekwara ike ịhụ ogidi nkume dị n'akụkụ nkuku a maara dị ka Señoritas de Arás nakwa na mpaghara Campo de Daroca na Biescas.
Ebe ndị ọzọ na Spain ebe anwụrụ ọkụ ha dịkwa na mbara ọzara Bárdenas Reales, na Castildetierra (Navarra).
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, ndịda France ka nwere ihe nzuzo iji chọpụta maka ndị njem. Na mpaghara Pyrénées-Orientales, ebe obodo Perpignan dị, bụ Les Orgues d'Ille sur Têt, bụ nnukwu okwute nke na-ele ugwu Canigou nke mmiri na ifufe kpụrụ akpụ kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Okirikiri ala nke Orgues d'Ille sur Têt nwere okwute okwute ndị yiri ka onye na-amaghị ihe a kpụrụ akpụ yikwasịrị ha, dị ka anwụrụ ọkụ ifo. O yiri ụlọ egwuregwu amphitheater nke nwere mgbidi etinyere na nnukwu ogidi. Ebe odida ala akọrọ ma na-agbanyeghị na anwụrụ ọkụ na-akọ n'akụkọ ifo ka a na-atụbeghị anya ọtụtụ afọ, nke bụ eziokwu bụ na ha na-emebi emebi karịa ka ha na-apụta n'ihi na mmiri ozuzo na ifufe jiri nwayọ gbanwee ha ma gbanwee ha ka ha bụrụ ihe ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Fairy Chimneys